सानो कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ : अध्यक्ष लामा – Quick Khabar
२०७८ भाद्र २१, सोमबार १२:४४ मा प्रकाशित
मुगु कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रुपमा चिनिन्छ । जिल्लामा एक नगरपालिकासहित तीनवटा गाउँपालिका छन् । मुगुका अन्य स्थानीय तहभन्दा मुगूम कार्मरोङ गाउँपालिका पर्यटन हिसाबले भरिपूर्ण, बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाको भण्डार मानिन्छ । यहाँ लामा समुदायको बाहुल्यता छ । जडीबुटी र पर्यटनबाट गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने पालिकाको मुख्य लक्ष्यसहित पालिकाले पूर्वाधारमा फड्को मारेको छ । भौगोलिक हिसाबले अन्य स्थानीय तहभन्दा यो गाउँपालिका ठूलो छ । जडीबुटी व्यापार, पर्यटन, कृषि र पशुपालनको उच्च सम्भावना बोकेको यो गाउँपालिकामा आवाश्यक नीति तथा कार्यक्रमको खाँचो छ । देश संघीयतामा गएको चार वर्ष बितिसकेको छ । तीन सरकारमध्ये नजिकको स्थानीय सरकारले निर्वाचनताका जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम भयो त ? चार वर्षमा पालिकाले उल्लेखनिय कार्य के भयो ? यिनै विविध विषयमा केन्द्रित भएर गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामासँग खड्क सुनारले गरेको कुराकानी :
छिरिङक्याप्ने लामा अध्यक्ष
राजनीतिक आस्थाका आधारमा हामीले योजना बाँडफाँट गरेका छैनौं । अन्य स्थानीय तहमा त्यस्तो प्रवृत्ति होला । हाम्रो पालिकामा त्यस्तो छैन । समान तरिकाले आवश्यकताका आधारमा विकासका योजना बाँडेका छौं । र, योजना बाँडफाँटमा स्थानीयको पनि उत्तिकै उपस्थिति हुन्छ । विकास निर्माणको छनोटमा जनता आउनु प¥यो । किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले योजना छनोट तथा वितरण गर्दा स्थानीयको भेलाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुरुप हामीले काम गरेका छौं । गाउँस्तरमा योजना छनोट गर्नुपूर्व के समस्या छ ? त्यो त त्यहाँकै जनतालाई थाहा हुन्छ । सोहीअनुसार विकासका योजना बाँडफाँट गर्ने हो । स्थानीयको उपस्थितिबिना कुनै पनि काम सम्भव छैन । गाउँपालिकामा जति विकास भए, त्यो जनताको इच्छा र चाहनाअनुसार भएको छ । बजेट थोरै होला । काम ढिलै होला । तर स्थानीयवासीको इच्छाअनुसार भएको छ । न्युज कारखाना